नेपालको नयाँ नक्सालाई तारिफ गरेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया ! - Gandak News
नेपालको नयाँ नक्सालाई तारिफ गरेको भन्दै मनिषा कोइरालामाथि खनिए भारतीय मिडिया !
गण्डक न्यूज द्वारा ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:०७ मा प्रकाशित 0
भारत – नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको विषयमा मनिषाको एउटा ट्विटलाई लिएर उनीहरुको आक्रोश पोखिएको हो ।
‘मनिषाले जेजति नाम कमाएकी छिन्, त्यो भारतले दिएको हो । तर आज उनी खुलेर नेपालको समर्थनमा उत्रेकी छन् । नेपालको सरकारले जारी गरेको विवादास्पद नक्सालाई तारिफ गरेका छिन्,’ सो टेलिभिजनले भनेको छ ।
अनलाइन सपिङ ग्यापु डटकम र सेल्सबेरी बीच ब्यापार साझेदारी
नेपालमा कोरोनाबाट मृतकको संख्या १० पुग्यो, पाल्पामा मृत्यु…
फेवातालमा डुबेर मृत्यु भएका युवकको १ महिनासम्म पनि पहिचान…
थप ३३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या २६ सय…
गण्डकी प्रदेशमा थपिए १६ जना कोरोना संक्रमित, कुल ५४ पुग्यो
अनलाइन सपिङ ग्यापु डटकम र सेल्सबेरी बीच ब्यापार…
सुर्यमणि प्रतिष्ठान र पोखरा इन्जिनियर्स…
स्पेनिस ला लिगा जुन ११ बाट सुरू हुने पक्का
कोरोनाबाट दोलखाका ७६ वर्षीय पुरुषको मृत्यु,…
पुर्वी नवलपरासीमा एक वृद्धाको मृत्यु: हत्याको…
नेपाल आइन् अभिनेत्री मनिषा कोइराला
अनलाइन सपिङ ग्यापु डटकम र सेल्सबेरी बीच…
खाडी मुलुक बहराइनमा कोरोना संक्रमित…
नेपालगञ्जमा १६ वर्षे किशोरमा कोरोना…